Fickle Aid Strategies Compromise Indigenous Children’s Education Rights
The availability of external funding to Indigenous providers of education has become increasingly unstable in Myanmar. What does this mean for the education rights of Indigenous children. (See Burmese language below) _________
The education sector in Myanmar is highly diverse and is heavily marred by the country’s complex and long history of conflict. Until recently, there was chronic underinvestment in education support and the government education system was highly centralised. Prior to 2015, the Ministry of Education (MoE) mandated the sole use of Myanmar as the language of instruction, prohibited the teaching of ethnic languages and usedastandardised curriculum that did not reflect local contexts or ethnic minority cultures. Hence, government education has long been perceived by many ethnic nationality groups asatool for assimilating non-Bamar populations andakey driver of conflict.
In contrast, indigenous providers of education have developed and defined their own education systems based on culture, ethnicity and language origins. They have playedasignificant role in providing access to culturally relevant quality education for indigenous children. This is recognised by the Myanmar government, who acknowledge within the National Education Sector Plan (NESP) 2016 – 2021 that they are not the sole provider of education in the country and that an important factor in achieving basic education reforms is the extent to which they are mainstreaming within other organisations providing basic education across the country.
To this end, the NESP foresees the development ofapartnership mechanism between the Ministry of Education and Indigenous providers of education.
Despite the opportunity for indigenous education systems to haveasignificant role in the future national education system, the Karen education system is facing significant funding shortfalls. A recent (24 January 2020) urgent announcement by the Karen Teachers Working Group (KTWG) was released declaring that the system is on the brink of collapse due to an 80% budget cut by one of their key strategic partners, the Myanmar Education Consortium (MEC).
The MEC was founded in 2013 by Save the Children, World Vision and the Burnet Institute and is operated by Save the Children asamulti-donor pooled fund with contributions from DFAT (Australia), DFID (UK) and DANIDA (Demark). The MEC’s stated mandate is to support system strengthening of indigenous education systems throughout the country and, withabroader range of diverse stakeholders, to address key policy barriers to enableatransition toadiverse and inclusive national education system. According to the KTWG, the funding cuts are due to MEC budget constraints and will ‘decimate support and quality improvements putting at risk almost all essential elements of the Karen education system.’
This situation is not unique. As donors have increasingly normalised relations with the Myanmar government and turned to supporting the MoE, the availability of external funding to indigenous providers has become increasingly unstable. This promoted the EU in 2019 to balance its EURO 200 million budget support to the MoE withaEURO 20 million grant to the Rural Indigenous Sustainable Education (RISE) network of 11 indigenous providers of education with the intention of takingaconflict-sensitive and balanced approach to the EU’s support to education provision in Myanmar. This is also in line with the EU’s commitment to operationalise the humanitarian – development nexus, which calls for greater emphasis on strengthening local capacities, sustaining indigenous provision and promoting inclusive governance in countries recovering from conflict.
While the EU’s strategy is commendable, other development partners seems to haveamore fickle and short-term strategy driving their support for indigenous education systems. At best the funding cuts demonstratesanaïve view of governance regimes and conflict dynamics within the country. At worst they demonstratesawilful intention to undermine indigenous service provision and to compromise indigenous children’s education rights. _________ The author is an independent education expert that has supported the work of indigenous providers of education for over ten years
မတည်တံ့တဲ့ အထောက် အပံ့ နည်းလမ်း တွေ ကြောင့် တိုင်း ရင်းသား ကလေး ငယ်တွေ ရဲ့ ပညာသင် အခွင့် အရေးကို သက်ရောက် မှု ရှိစေပါသည်။
မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသ တွေမှာ ပညာ သင်ကြား ပေးနေ သူတွေ အတွှက် နိုင်ငံရပ်ခြား မှ အကူ အညီ ရရှိ မှု ဟာ ပိုပြီး မတည် မငြိမ် ဖြစ် နေ ခဲ့ ပါပြီ။ အဲဒါဟာ တိုင်းရင်းသား ကလေးငယ် တွေ အတွက် ပညာသင် အခွင့် အရေး ကို ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်စေပါသလဲ။
တိုင်း ပြည် ရဲ့ ရှုပ် ထွေး ပြီး သမိုင်းနဲ့ ချီ ရှည် ကြာလှ တဲ့ ပဋိ ပက္ခ တွေ ကြောင့် မြန်မာ ပြည် ရဲ့ ပညာရေး ကဏ္ဍ ဟာ ကွဲပြား ခြားနား မှု မြင့်မား ပြီး ကြီးကြီး မား မား ကျဆင်း နေ ပါတယ်။ ယခု အ ချိန် မတိုင် ခင် အထိ ၊ နှစ် ပေါင်းများစွာ ပညာ ရေး အသုံးစားရိတ် လျှော့ နဲ ပြီး ဗဟို ချုပ် ကိုင် မှု မြင့်မားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခု နှစ် မတိုင် ခင် ထိ ပညာ ရေး ၀န် ကြီး ဌာ န ဟာ မြန် မာ ဘာ သာ စကား တမျိုး ထဲ ကိုသာ အသုံး ပြု သင် ကြား ခဲ့ တဲ့ အပြင်၊ တိုင်း ရင်း သား ဘာ သာ စကား တွေ နဲ့ သင်ကြား တာ ကိုလဲ ပိတ် ပင် ခဲ့ ပြီး ၊ တိုင်း ရင်းသား ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ရေခံ မြေ ခံ တွေ ကို ထင် ဟပ် မှု မရှိ တဲ့ စံ သင်ရိုး ညွန်းတန်း ကိုသာ အ သုံး ပြု ခဲ့ပါတယ်။ ထို့ ကြောင့် မြန်မာ အစိုး ရရဲ့ ပညာ ရေး ကို တိုင်း ရင်း သား လူမျိုး စု တွေ က ဗမာ မဟုတ် တဲ့ လူ မျိုးတွေ ကို ၀ါး မြို ဘို့ အသုံး ပြုတဲ့ ကိရိယာ အဖြစ် မြင် တဲ့ အပြင် ပဋိ ပက္ခ ဖြစ် စေတဲ့ သော့ ချက် တခု အဖြစ် လဲ နှစ် ပေါင်း များ စွာ မြင် ခဲ့ကြပါတယ်။
သို့ ပေမဲ့၊ တိုင်းရင်းသား စာ ပေ သင်ကြား ပေးသူ တွေဟာ သူ တို့ ရဲ့ မူလ ဘာသာစကား၊ လူမျိုး နဲ့ ယဉ်ကျေး မှု အပေါ် အခြေ ခံတဲ့ ကိုယ် ပိုင် ပညာ ရေးစံနစ်ကို သတ် မှတ် ပြီး ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက် စေခဲ့ပါပြီ။သူ တို့ ဟာ တိုင်း ရင်းသား ကလေး ငယ်တွေ ရဲ့ ပညာ ရေး အ တွက် ယဉ်ကျေး မှု နဲ့ လျှော် ညီ တဲ့ အဆင့် မီ ပညာ ရေး ရရှိ ဘို့ကဏ္ဍ မှာ အဓိ က အခန်း ကပါဝင် ခဲ့ ပါ ပြီ။ အမျိုးသား ပညာရေး ကဏ္ဍ စီမံကိန်း (အန်အီးအက်စ်ပီ) ၂၀၁၆-၂၀၂၁ အရ အခြေခံပညာရေး ကဏ္ဍ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ရာ မှာ အောင် မြင် မှု ရ ဘို့ အတွက် အစိုးရ တဦးတည်းသာမဟုတ်ပဲ နိုင်ငံ တ၀ှန်း အခြေ ခံပညာရေး သင်ကြားပေး နေ တဲ့ အ ခြား ပညာရေး အဖွဲ့ အစည်း တွေ ကိုပါ ပါဝင် စေ ခြင်း ဟာ အရေး ကြီး တဲ့ အချက် တချက် ဖြစ် ကြောင်း ပြဌာန်း ခဲ့ပြီး ဒါ ကို အစိုး ရ က အသိ အမှတ် ပြု ခဲ့ ပါတယ်။ အဆို ပါ ပြု ပြင် ပြောင်း လဲ မှု အောင် မြင် ရေး အတွက်၊ အမျိုးသား ပညာရေး ကဏ္ဍ စီမံကိန်း က ပညာ ရေး ၀န် ကြီး ဌာ န နဲ့တိုင်း ရင်းသာ ပညာ ရေး အဖွဲ့တွေ ကြား တွဲ ဖက် လုပ် ဆောင် နိုင် မဲ့ လုပ် ငန်း စဉ် တခု ဖြစ် ပေါ် ရေး အတွက် ကြိုး ပမ်း ချမှတ် ခဲ့ပါတယ်။
အနာဂတ် တမျိုးသားလုံး ပညာ ရေး စံနစ် မှာ တိုင်း ရင်း သား ပညာရေး စံနစ် က အ ရေး ကြီး တဲ့ နေရာ မှာ ရှိ နေ ကြောင်း သိသာ ထင်ရှား နေ ပေမဲ့ ကရင်လူ မျိုး တွေ ရဲ့ ပညာ ရေး စံနစ် ဟာ ရံပုံ ငွေ ပြတ် လတ် မှု နဲ့ကောင်းစွာ ကြုံ နေ ရ ပါတယ်။ ကရင် ကျောင်း ဆရာ များ အမှု ဆောင် အဖွဲ့ ရဲ့ လတ် တလော ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန် န ၀ါ ရီ ၂၄ ရက် ထုတ် ပြန် မှု အရ ၊ ကရင် ပညာ ရေး စံနစ် ဟာ အဓိက ကျ တဲ့ ရံ ပုံ ငွေ ထောက် ပံ့ သူ တဦး ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ ပညာ ရေး လုပ် ငန်းစု( အမ်အီးစီ) က ၈၀ ရာနုန်း ရံပုံ ငွေ ဖြတ် တောက် မှု ကြောင့် ပြို ကျလု ဆဲဆဲ ချောက် ကမ်းပါး ပေါ် မှာ ရှိ နေ တယ် လို့ သိ ရပါတယ်။ အမ်အီးစီ ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် မှာ ( Save the Children, World Vision, and Burnet Institute) တို့ က ပူး ပေါင်းတည် ထောင် ပြီး Save the Children က အလှု ရှင် အများစုပေါင်း ရံ ပုံ ငွေ နှင့် အတူ သြစတေးလျှ အစိုးရ နိုင်ငံခြား ရေး နဲ့ ကုန်သွယ်မှု ဌာ န အကူ အညီ၊ ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေး ဌာန အပြင် ဒိန်းမတ် နိုင်ငံ တို့ ရဲ့ အကူ အညီ တွေကို အသုံး ပြု ပြီး လုပ် ငန်း ဆောင် ရွက် တာ ဖြစ် ပါတယ်။ အမ် အီး စီ ရဲ့ ရည် ရွယ် ချက် က တိုင်း ရင်းသား ပညာ ရေးစံနစ် အား ကောင်း အောင် ထောက် ပံ့ ဘို့ အပြင် ကွဲပြားခြား နား မှုနဲ့ အတူ အားလုံးပါဝင် တဲ့ အမျိုးသားပညာရေး စံနစ် ဆီ သို့ ပြု ပြင် ပြောင်းလဲရာမှာ သော့ချက် ကျ တဲ့ မူဝါဒ အတား အဆီးတွေကို ဖယ် ရှား ရေး အတွက် ပါဝင် ဆောင် ရွက် သူ တွေ ကို ပို ပြီး အားကောင်း လာ စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကရင် ကျောင်းဆရာများ အမှု ဆောင် အဖွဲ့ အဆိုအရ ရံပုံ ငွေ ဖြတ် တောက် မှုဟာ အမ် အီး စီရဲ့ အသုံးစားရိတ် အကန့် အသတ် တွေ ကြောင့် ဖြစ်ပြီး ဒါဟာ ကရင် ပညာ ရေးစံနစ် အတွက် မရှိမ ဖြစ် လို အပ် ချက် အားလုံး နီးပါး ကို ထိ ခိုက် စေပြီး ထောက် ပံ့ မှု တွေ နဲ့အရည် အသွေး တိုး တက်မှုတွေ ကို အဆုံးသတ် သွားစေမှာ ဖြစ် တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီ အ ခြေ အ နေ ဟာ ထူး ခြား တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အလှု ရှင် တွေ က မြန်မာ အစိုး ရ နဲ့ တိုး ပြီး ပုံမှန် ဆက် ဆံ ရေး ထူထောင် ကာ ပညာ ရေး ၀န်ကြီးဌာ န ဘက် မျက် နှာ လှည့် သွား တာ နဲ့ တပြိုင် နက် တိုင်း ရင်းသား တွေ အတွက် ပညာ ရေး ရံပုံ ငွေ ကတော့ တိုး ပြီး မတည် မငြိမ် ဖြစ်လာ ပါတော့တယ်။ ဥရော ပ သမဂ္ဂ ရဲ့ ရည် ရွယ် ချက် က တော့ အကဲဆတ် တဲ့ ပဋိ ပက္ခ နဲ့ မြန် မာ ပြည် ရဲ့ ပညာ ရေးအေ ပါ် ထောက် ပံ့ မှု ညီ မျှ စေဘို့၂၀၁၉ ခုနှစ် မှာ ပညာ ရေး ၀န် ကြီးဌာ န ကို ယူ ရို ငွေ သန်း ၂၀၀ ထောက် ပံ့ တာ နဲ့ အတူ၊ ကျေးလက် ဒေ သ တိုင်း ရင်းသား ပညာ ရေး ကွန် ယက် ၁၁ ခု ကိုလဲ ယူ ရို ငွေ သန်း ၂၀ တိုး မြုင့် ထောက် ပံ့ ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါ ဟာ ဥရော ပ သမဂ္ဂ ရဲ့ ခံယူ ချက် ဖြစ် တဲ့ လူသား ဆန် တဲ့ အကူ အညီ နဲ့ဖွံ့ ဖြိုး မှု အတွဲ အစပ် ကို အကောင် အထည် ဖေါ် ဖို့ဆိုတဲ့ အချက် နဲ့ ကိုက် ညီမှု လဲ ရှိ ပါတယ်။ အဲဒီ ထောက် ပံ့ မှု ဟာ ဒေသ တွင်း စွမ်း ရည် မြင့် တက် စေ မှုကို ကောင်းစွာ အလေးထား တဲ့ အပြင် တိုင်း ရင်း သား တွေ အ ပေါ် ထောက်ပံ့ မှုကိုလည်း ဆက်လက် ထိန်း သိမ်း ထား ပြီး ပဋိ ပ က္ခ က နေ နာလံ ထ လာ တဲ့ တိုင်း ပြည် အတွင်း မှာ အားလုံး ပါဝင် နိုင်တဲ့ အုပ် ချုပ် မှု ပုံစံကို တိုး မြှင့် လုပ် ဆောင် ဘို့တောင်းဆိုလိုက် တာလဲ ဖြစ် ပါတယ်။
ဥ ရော ပ သမဂ္ဂ ရဲ့ ဗျုဟာ ကို ချီးမွမ်း နေ စဉ် မှာ ပဲ အခြား သော ဖွံ့ ဖြိုး ရေး လက် တွဲ လုပ် ဆောင် နေ သူ အဖွဲ့ အစည်း တွေ က တော့ ပို ပြီးမတည် မငြိမ် ဖြစ်လာ တာ တွေ့ ရပြီး ရေ တို ဗျုဟာ နဲ့တိုင်း ရင်းသား ပညာ ရေး စံနစ် အပေါ် ထောက် ပံ့ မှု တွေ ကို လုပ် ဆောင် နေ ပုံ ရ ပါတယ်။ ထောက် ပံ့ တဲ့ ရံ ပုံ ငွေ ဖြတ် တောက် မှုတွေ ဟာ အဲ ဒါ ကို စီ မံ အုပ် ချုပ် တဲ့ သူ တွေ ရဲ့ အမျှော် အမျှင် နည်း ပါး တဲ့ အမြင် နဲ့တိုင်း ပြည် တွင်း ပဋိ ပ က္ခ ကြီးထွား လာ မှုကို အ ကောင်း ဆုံး သရုပ် ဖေါ် နေ ပါတယ်။ အဆိုး ဆုံး ကတော့ ရည် ရွယ် ချက် ရှိ ရှိ သူ တို့ ရဲ့လုပ် ဆောင် ချက်ဟာ တိုင်း ရင်းသား တွေ အပေါ် ပညာ ရေး ထောက် ပံ့ မှုကို အား နဲ စေ ပြီး တိုင်း ရင်းသား က လေး ငယ်တွေ ရဲ့ ပညာ သင် ကြား နိုင်မှု အ ခွင့် အရေး နဲ့ပညာ ရေး အထောက် အပံ့ ကို အ ပေး အယူ လုပ် ဘို့ဖေါ် ပြ နေ တာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။
Photo credit : KTWG